श्यामसुन्दरका उदास आँखा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
बच्चुकैलाशको तीन मिनेट पन्ध्र सेकेन्डको त्यो एउटा गीतले कत्ति धेरै कथा बोकेको रहेछ ⁄ कसले भन्छ, उत्खनन जमिनमा मात्रै हुन्छ ? कसले भन्छ, पुरातात्त्विक महत्त्वका विषय जमिनमा मात्रै फेला पर्छन् ?
श्रावण ९, २०७८ ब्रजेश
म बच्चुकैलाशको ठूलो प्रशंसक हुँ । त्यसैले उनीप्रति आदर र सम्मानको रूपमा म कार्यक्रममा उनको एउटा गीत गाउन चाहन्छु । कसो होला ?’ उनले शालीन स्वरमा विनम्रतापूर्वक प्रश्न गरे । उनी दुब्ला पातला थिए । उनको कपाल फुलिसकेको थियो । चाउरीका केही मुजाहरूले उनको अनुहारमा अधिकार जमाउन थालिसकेका थिए । तर, उनी तेजिला थिए । फुर्तिला थिए । उनको खास नाम त त शान्तनुकुमार लिम्बू हो । मणिपुरका नेपालीभाषी गायक । तर, उनी पाबुङ भनेर बढी चिनिन्थे । पाबुङ त्यहाँको भाषामा माया र आदरको शव्द रहेछ । त्यसैले सबैले उनलाई पाबुङ भनेर बोलाउँदा रहेछन् ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १०:२९